အသံစက်များရူးသွပ်မက်စ်၏သရုပ်ဆောင်နှင့် Crew နှင့်အတူရိုင်းစီးနင်းသွားလေ၏: Fury လမ်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အသံစက်များရူးသွပ်မက်စ်၏သရုပ်ဆောင်နှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းနှင့်အတူရိုင်းစီးနင်းသွား: Fury လမ်း
အသံကိရိယာများ Wild စီးနငျးတိုကျခိုကျတတ်
CAST နှင့်သင်္ဘောသားနဲ့ MAD MAX: Fury လမ်း
အသံဖုန်းများအတွက် 7-စီးရီး high-speed ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါသောထေူ
အဆိုပါ Hot, နမီးဘီးယား၏စန္ဒီအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး
နာမီဘီယာ, အာဖရိက, မေ 28, 2015 - ခေါင်းစဉ်ကိုဆိုလိုသကဲ့သို့, အရူးမက်စ်: Fury လမ်းမကြီး တစ်ဦးသဲကန္တာရလွင်ပြင်၌ရှိသောသစ်ပင်ကိုသတ်မှတ်နေတဲ့အရူးနှင့်ပြင်းထန်သော, High-action ကို Post-Apocalyptic ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြံစည်မှုသည်သူ၏ရက်စက်လက်စွဲအနေဖြင့်လွတ်လပ်ခွင့်များအတွက်အပူတပြင်း, မြန်နှုန်းမြင့်လေလံအတွက်သဲရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီးပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုစစ်ဘုရင်ရဲ့မိန်းမဆောင်ဘို့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လွတ်မြောက်လာသူနှင့်၎င်းတို့၏လိုက်သောသူတို့သည်နှစ်ဦးစလုံးသံချပ်ကာယာဉ်များတစ်ခု "armada" ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကြောင်းသဲမုန်တိုင်းအတွင်း Hidden အားလုံးရွေ့လျားမှုရှိနေစဉ်, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့အသံသက်ရောက်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ bit နဲ့ဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေ, အသံအမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဧရာမစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, ဝါရင့်ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှောဘင် Osmo နှင့်ယာဉ် FX Recordist မှာ Oliver machine မှလှည့် အသံဖုန်းများအတွက်'' ဒီဂျစ်တယ်အသံမှတ်တမ်းများ 7-စီးရီး။
"ငါသည်လေးကိုအသုံးပြု 788T-SSD ကိုs ကိုပေါင်းလေး CL-8s ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသံဖမ်းဆင်းရောထွေးခဲ့ဘူးပေါင်းတစ်ဆင်းနှစ်လမ်းကြောင်းရောနှော 744T နေ့စဉ်သတင်းစာများအဘို့, "Osmo ကဆိုသည်။ "ငါသည်ငါ့အသံကလှည်းအတွက်အကြံအဖန်တစ် 788T ခဲ့နဲ့ဗီဒီယိုအုပ်စုခွဲဖို့လာမယ့်နှစ်, လ, ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ပိုကြီးတဲ့ထရပ်ကားထဲမှာသိုထား၏။ " အဲဒီပစ္စည်းကိရိယာများအပြင်, မှာ Oliver စက်အပိုမော်တော်ယာဉ် FX မှတ်တမ်းတင်ဖို့အိတ်တစ်ဆဋ္ဌ 788T ယူဆောင် သည့်အခါလိုအပ်သော။
Osmo စိန်ခေါ်အစွန်းရောက်အခြေအနေများအောက်တွင်မျိုးစုံပုဒ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အခါမျိုးစုံ 788Ts များအသုံးပြုမှုလိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည် "ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ 788Ts အလွန်စွယ်စုံခဲ့ကြသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာက ISO ပုဒ်များနှင့်ရောနှော Down အဖြစ်ကျနော်တို့ aux နှင့်အတူရောနှော minuses ကို set up နိုင်ခဲ့ကြတယ်တစ်ဦးမော်နီတာရောနှောသို့ပို့ပေးသည်။ ကျနော်တို့ရေဒီယို MICS ၏ရရှိနိုင် 42 လိုင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် repeater စနစ်များနှင့်ကစားအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော RF လုပ်ကွက်၏ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်အချိန်မော်တော်ယာဉ်များ-တူးစင် pre နိုင်, သူတို့အရေးယူရှိကြ၏တစ်ချိန်ကငါ၏အဗန်၌ငါထို့နောက်မှန်ကန်သောလက်ခံလုပ်ကွက်မှကူးလိမ့်မယ်။ "
စက်ကအများအပြားက transmitter ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်မျိုးရယ်စရာကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့ ... အယာဉ်များအပေါ် MICS စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်နှင့် Mark Wasiutak ကိုလည်းရိုက်ချက်များနှင့်အတူအချိန် slates နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းသက်ရောက်မှုဖမ်းပြီးတစ်ဦးစန်းမိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်အတူသွားလာလိမ့်မယ်။ "
အဲဒီမှာသီးခြားအရေးယူယူနစ်သံကိုအသင်းနေဆဲအရေးယူလိုက်စား, တစ်ဦးထက်ပိုသောရိုးရှင်းသောစနစ်အား အသုံးပြု. လည်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်တော်ယာဉ်အသံဒါအနာဂတ် automated တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုအစားထိုး (ADR) အတွက်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအသံကျယ်-ပေးခဲ့ကြသည်။
မိုက်ခရိုဖုန်း cabin ထဲမှာနှင့်မူအရသွန်းပေါ်အင်ဂျင် bays အတွက်အနီးအိတ်ဇော, ကို "စစ်ပွဲရေနံတွင်းတူးစင်" (အဓိကဇာတ်ကောင် '' get-ကွာမော်တော်ယာဉ်) ၏ထိပ်ပေါ်မှာနှင့်အခြားအတွက်ထောက်ပံ့သွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကအပေါ်ကိုဝှကျထားခဲ့ကြသည် မော်တော်ယာဉ်များ။ အော်ဒီယိုအပေါငျးတို့သဖမ်းယူနေတဲ့ပုံမှန်သံကိုစင်မြင့်ပေါ်အဓိကတာဝန်, ဒါပေမယ့်အဘို့သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူလိုအပ်ချက်များကိုပါလိမ့်မယ် ဒေါသအမျက်ကိုလမ်းမ ပုံမှန်ရုပ်ရှင်-စတူဒီယိုအသံ setup ကိုအဘို့အခွင့်ပြုရန်, ဒါကြောင့်သင်္ဘောသားဖန်တီးမှုရခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။
"ကျနော်တို့4×4မော်တော်ယာဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်," machine သူတို့ Osmotron ဟုအမည်ပေးထားသည့်ဘင် Osmo ရဲ့ဗန်ဖော်ပြကပြောသည်။ "အဲဒီအစားအစဉ်အလာသံကိုလှည်းရှိခြင်း၏ ... တဲ့ 80- မှာခရီးသွားလာလမ်းရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်သဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီး 90-မိုင်တစ်နာရီပေါ်မှာဖြတ်ဖို့သွားမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဘယ်သူမှဖွင့်ထားရန်သွားခဲ့ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူ့မော်တော်ယာဉ်သို့ရေဒီယိုမိုက်ကရိုဖုန်းအသံဖမ်း၏ကြီးမားသောထိန်သိမ်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ "
"ဒါဟာရှိသမျှတို့ကိုငါ SSD ကို 788Ts ခဲ့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်," Osmo ကဆိုသည်။ ထိုသို့ခြောက်ပါးစပ်-ရှည်လျားထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားအတွင်းနမ်မီးဘီးယားသဲကန္တာရ၏လှုပ်စုပ်ယူနိုင်အောင် "ဒါကြောင့်ရိုက်ကူးရေးအများစုလမ်းပိတ်ထားခဲ့သော်လည်း, သူတို့သည်အစွန်းရောက်တုန်ခါမှုအောက်တွင်အတော်လေးကောင်းစွာလုပ်ဆောင်။ " သီးခြားတစ်ဦး 744T တစ်အိတ်အတွက်ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည် ။ "သူတို့ကအလွန် bumpy နှင့်ဖုန်ထူမြေပြင်အနေအထားခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အပေါ်မှတ်တမ်းတင်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးစည်းချက်ခုန်ဘူး။ "
ရှုပ်ထွေးဖို့ထည့်သွင်းခြင်း, ထိုသွန်းအင်္ဂါများသံချေးတက် box ထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့် RF ဧည့်ခံ Repeaters တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိုအပ်သောအောင်, rethought ကြရသည်။ အဆိုပါသင်္ဘောသား, 1-to-3 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာမဟုတ်ဘဲကိုလည်းနောက်ကွယ်မှဆက်သွယ်ရေးအကူအညီမှ RF ပေါင်းစပ်နှင့်မြင့်မားသော-powered transmitter ကို Boosters နှင့်အတူ (ဘင် RF ကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီဖြင့်ဒီဇိုင်း) ကိုသုံး multiplexing စနစ်များကို set up မြင်ကွင်းများ။
"ကျနော်တို့ရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရီးထွက်သကဲ့သို့, walkie Talkie အတိုင်း repeater တာဝါတိုင်အကွာအဝေးထဲကမကြာခဏခဲ့ကြပါတယ်" ဟု Osmo ဒါနဲ့ဒါရိုက်တာဂျော့ခ်ျ Miller နဲ့ပထမဦးစွာအေဒီနှင့်တွဲဖက်ထုတ်လုပ်သူဖို့ Lectrosonics ရေဒီယို MICS နှင့် IFB စနစ်များ၌ငါ့စနစ်များကိုတောင်းဆိုခံရတယ် "ဟုပြောသည် သူတို့မှာလည်းမကြာခဏ 500 အလွန်ဝေးကွာသောဆိတျကှ-ကအနည်းဆုံး 1.5 မီတာခဲ့ကြသည်အဖြစ် PJ Voeten, ကီလိုမီတာ-နှင့်သူတို့လက်၌အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှိသည်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ဆရာယောဟနျတံဆိပျနဲ့သူ့အော်ပရေတာနှစ်ခုအဖြစ်ကောင်းစွာ, ဒီစနစ်ကများနှင့်ပထမဦးဆုံး AC အကိုကင်မရာကလူအပေါ်ကြတယ်။ "
comm လည်း Hugh Keays-Burn နေဖြင့်ကစား Immortan ဂျိုးအပါအဝင်သွန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက် IFB အသံဖမ်း, အသံအစာကျွေးဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အသံကရောနှောအဖြစ်, Osmo ကိုလည်း "Doof Wagon" မော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေစီးနေစဉ်စည်းချက်ရန်အချိန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဗုံနှင့်တစ်ဦးလျှံဂစ်တာအဖြစ်တူရိယာ, ကစားခြင်းအတွက်သူတို့ကိုကူညီစကားကိုနားထောငျ wigs နှင့်အတူလက်နက်ပါဂီတသမားတစ်ဦးဂီတရောနှောအစာကျွေးခဲ့ကြရသည်။
action ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရောက်လာသောအခါ, သာမော်တော်ယာဉ်များခြေရာခံကင်မရာ, လို့လည်းသိကြပါတယ်, နှင့်အထီးကျန်သံကိုဗန်လိုက်စားရှိကြ၏။ ကင်မရာများဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သောအခါ, Mark Wasiutak အဓိကစန်းအော်ပရေတာ, အသူရဲကောင်းယာဉ်များအပေါ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ သူ armada စစ်ဆေးမှုများအဘို့ရပ်တန့်ခဲ့သည်အခါတိုင်းအသံသင်္ဘောသား၏ကျန်ထံမှအကူအညီဖြင့် troubleshoot နိုင်ခဲ့သည်။
"ဒါဟာလုံး armada ကဲ့သို့ဖြစ်၏," စက်ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်ရပ်တန့်ပြီးတာနဲ့ "တိုင်းဦးစီးဌာနကိုသူတို့ 4x4s အတွက်ခုန်ခြင်းနှင့်ကူညီပေးဖို့ခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်။ ငါစာသားသူတို့န်းကျင်ဖွင့်နှင့်နောက်တဖန်ပြန် လာ. , ငါး, ခြောက်လ, ခုနစ်ကီလိုမီတာသဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီးသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်ဝေးကွာသွားပါ။ "အသစ်ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံစခန်းများပြောင်းရွှေ့လုံးယူနစ်, ထို့နောက်နောက်တဖန်သွားကြဖို့ cue များအတွက်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ "ဒါဟာကြောင်းဖြစ်ပျက်စေရန်အတော်လေးတစ်ဦးလုပ်ရပ်ပါပဲ။ "
အဆိုပါ 788T-SSD ကိုရှစ် Full-featured မိုက်ခရိုဖုန်းသွင်းအားစုများနှင့်အသံဖမ်းဆယ်နှစ်ပုဒ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျစ်လျစ်, Light-အလေးချိန်, သံမဏိနှင့်လူမီနီယံကိုယ်ထည်ထဲမှာ, 788T-SSD ကိုတစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုများနှင့် connectors က၎င်း၏ရှစ်သွင်းအားစုများ၏အသီးအသီးအဘို့အဖြစ်မြောက်မြားစွာအပိုဆောင်း I / O နှင့်အချက်အလက်ဆက်သွယ်မှုရှိကြတယ်။ အဆိုပါ 788T-SDD မှတပ်ဆင်ထားသည် optional ကို CL-8 ဆက်စပ်ပစ္စည်းယင်းအသံဖမ်းရဲ့ရှစ်သွင်းအားစုများ၏အသီးအသီးအဘို့အ rotary faders ပေး, တစ်ဦးအစွမ်းထက်ရောစပ်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး, ပေါင်း input ကို routing နှင့်ထိန်းချုပ်မှု setting ။
အဆိုပါ 788T-SSD ကိုကျော် 60 24 kHz မှာ 48-bit မှာရှစ်လမ်းသွားအသံ၏နာရီ, ပေါင်းပိုကောင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသံသွင်း, ကျယ်ပြန့် internal storage ကိုစွမ်းရည်အပါအဝင်အများအပြားအရေးကြီးသောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးရာစက်ရုံတစ်ရုံ-ထောက်ပံ့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Solid-State Drive ကိုအတူကြွလာ ထိတ်လန့်, အပူချိန်အစွန်းရောက်များနှင့်သုညအသံ output ကိုမှကိုယ်ခံစွမ်းအား။ ယင်း၏ထက်သာလွန်စျေးမှာကိုယ်ခံစွမ်းအားများအပြင်၌, 788T-SSD ကိုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ SSD ကိုလည်းမှုကြောင့်တစ်ဦးချည်ငင် hard drive ကိုနှိုင်းယှဉ်င်း၏တိုးပွားလာလွှဲပြောင်းမြန်နှုန်းမှဒေတာ transfer ပိုကောင်းစေပါတယ်။
အဆိုပါ 788T ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေး Multi-ကင်မရာထပ်တူပြုခြင်း-အသံကထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာညာဘက်ကိုအိမ်မှာကအောင်၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော timecode jamming နဲ့ပါတ်သက်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် အရူးမက်စ်: Fury လမ်းမကြီး။ တည်နေရာပေါ်နေစဉ် 788T, On-board ကို, High-တိကျမှန်ကန်မှုကို Ambient timecode မီးစက်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဒေါသအမျက်ကိုလမ်းမအဆိုပါသင်္ဘောသားဂရင်းနစ်အတောအတွင်းသတ်မှတ်ထားဂျီပီအက်စ်အင်တာနာများနှင့်ဝန်းကျင်မာစတာနာရီကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးကင်မရာများ Lockit သေတ္တာများနှင့်အတူထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Deneke Ambient Lockits နှင့်အတူ slates ခဲ့ကြသည်။
Osmo ကျွန်မရဲ့ 788T အသံဖမျးနှင့် 744T အတူတူ Ambient မာစတာနာရီကနေကုိုကြည့်ခဲ့ကြသည် "ဟုပြောသည်။ လူအားလုံးတို့သည်အသံဖမျးလှလှပပတက် synched နှင့်စည်းချက်လွဲဘူး။ "
အရူးမက်စ်: Fury လမ်းမကြီး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံများတွင်မေလ 2015 ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးသောဂျော့ခ်ျ Miller ကယ့်ရူးသွပ်မက်စ်ဂိမ်းနှင့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွက်ဂိမ်းအတွင်းပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထဲတွင်စတုတ္ထရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Charlize Theron, က Nicholas Hoult နှင့် Hugh Keays-Byrne နှင့်အတူမူရင်းခေါင်းစဉ်အခန်းကဏ္ဍအတွက် Mel Gibson အစားထိုး, ရူးသွပ်မက်စ်အဖြစ်တွမ် Hardy သရုပ်ဆောင်။
အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဒီဇိုင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်း-စုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်တယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်၏အမှတ်တံဆိပ် အသံဖုန်းများအတွက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, မစ်ရှင်-အရေးပါစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစား, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်မျိုးစုံ-Source ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းများနှင့် Madison, Wisconsin ပြည်နယ်နှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီအတွက်အပိုဆောင်းရုံးများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်, ဌာနချုပ်မှာနှစ်ဦးစလုံးအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်တယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
အရူးမက်စ် အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-05-29
ယခင်: PrimeTime Lighting အသစ်လွင်ဆုံးနဲ့ LED Lighting ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် 25% စက်ရုံလျှော့ကမ်းလှမ်း
နောက်တစ်ခု: ဇာတ်လမ်းကဒါရိုက်တာ Rich Michel ထည့်ပေးသည်